Kaoperativa FMA: 163, 194, 192, 109,165,143,166 : Hampiakatra saran-dalana -
AccueilRaharaham-pirenenaKaoperativa FMA: 163, 194, 192, 109,165,143,166 : Hampiakatra saran-dalana
23/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hampiakatra saran-dalana ho 500 Ariary ny mpitatitra mivondrona amin’ny FMA na ny Fitaterana mendrika ho an’Antananarivo , 163, 194, 192, 109, 165, 143, 166 manomboka ny voalohan’ny volana aogositra ho avy izao. Noho ny fahataran’ny fahatongavan’ny fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana sy noho ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy miato no voalaza fa anisan’ny antony mahatonga ireo koperativa ireo hampiakatra ny saran-dalany. Manoloana ny fampahafantarana nataon’ny mpitatitra mivondrona amin’ny FMA anefa, dia nanamafy ny teo anivon’ny minisitera mpiahy fa mbola mandeha ny fifampidinihana sy ny fifandresen-dahatra eo amin’izy ireo amin’izao fotoana izao. Nohamafisiny ihany koa fa misy lalàna mifehy ny fampakarana saran-dalana, ary misy fepetra takiana maromaro vao afaka mampakatra izany. “Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no hamahana ny olana. Na izany aza, dia tsy maintsy misy ny fepetra horaisin’ny minisitera mahakasika izany fanondrotana saran-dalana izany. Fitateram-bahoaka io ka misy lalàna mifehy azy. Noho izany, misy fepetra takiana maromaro ihany koa vao afaka manondrotra ny saran-dalana ny mpitatitra fa tsy mampakatra fotsiny amin’izao”, hoy ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fitaterana, Yves Ranaivoarimalala. Tafiditra amin’ny fepetra takiana izao ny kalitaon’ny tolotra omena ny mpanjifa, ny kalitaon’ny fiara sy ny zotra, ny lalan-kalehany amin’ireo faritra eto an-drenivohitra, sy ny maro hafa. Eo ihany mantsy ny fampakarana ny saran-dalana ho 500 Ariary fa ny tena olana dia ny eo amin’ny tolotra omena ny mpanjifa , ny kalitaon’ny fiara. Anisan’ny olana sedrain’ny mpandeha rehetra eto an-drenivohitra amin’izao tokoa ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo taksibe. Ankoatra ny tsy fanajana mpandeha miafara amin’ny fanompana indraindray, dia eo koa ny tsy fanomezana famerim-bola. Fa anisan’ny marary mafy ny rehetra ny fanariana ny mpandeha eny antenantenan-dalana, ankoatra ny fanaovana “vodihazo” eny amin’ny fiantsonana. Mipetraka noho izany ny fanontaniana amin’ny mety hahafenoan’ireo mpitatitra mivondrona eo anivon’ny FMA ireo fepetra takiana amin’ny fikasany hanondrotra ny saran-dalana. Tsiahivina fa efa tany amin’ny 20 taona lasa, dia mbola 200 Ar ny saran-dalana no nampanantena izy ireo fa hanatsara ny tolotra omeny ny mpanjifa, saingy mandraka androany dia mijanona ho resa-be fotsiny.
243 000 Ar isaka ny fiara mpitatitra no omen’ny Fanjakana
Raha ny fahataran’ny fahatongavan’ny fanampiana sy ny fiakaran’ny vidin-tsolika io kosa no nambaran’ireo mpitatitra fa antony hampakarana ny saran-dalana dia nanambara ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana, tamin’ny alalan’ny talen’ny kabinetra fa amin’ity herinandro ity no hanefana ny fanampiana ireo mpitatitra an-drenivohitra sy ny manodinana mivondrona ao anatin’ny UCTU sy ny UCTS ary ny FMA. Mizara roa kosa anefa izany arakarak’ireo mpitatitra, satria misy ireo nahafeno ny fepetra notakiana ara-dalàna, ary misy kosa ireo telo na roa volana taty aoriana ny fe-potoana tokony ho nanaovana izany vao nahafeno. Miankina tanteraka amin’ny antontan-taratasin’izy ireo, araka izany no ahafahana mandoa ilay fanampiana avy amin’ny Fanjakana. Izay marihina fa misy amin’izy ireo no mbola tsy mahafeno ny fepetra mihitsy hatramin’izao. Raha ny fanazavana ihany, dia mitentina 243 000 Ar isaka ny fiara mpitatitra no omen’ny Fanjakana ho fanampiana, ary miankina tanteraka amin’ny fahafenoan’ny fepetra notakiana tamin’izy ireo izany, toa ny tsy maintsy hananany kaonty amin’ny banky, satria amin’ny alalan’ilay “mobile banking” no hanefana izany. Eo ihany koa ny tsy fahatomombanan’ny taratasy fanoloran-tenan’ireo mpitatitra takian’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola, sns. Raha ny voalaza hatrany, dia mifanipaka ary tsy mitovy ny atontan-taratasin’izy ireo avy any amin’ny ATT sy ilay tena izy avy amin’izy ireo. Noho izay tsy fahatomombanana avy amin’ireo mpitatitra no tena mampitarazoka ny fanefan’ny Fanjakana ny fanampiana.